Igumbi elincane - imibono yokulungisa
Ngaphambi kokuba abanikazi bezindlu zokuhlala ezincane, banquma ukulungisa, umbuzo uvela: yini okudingeka yenziwe ukwenza igumbi elincane lisebenze, lihlanganiswe futhi lihle. Emva kwakho konke, ngifuna ekamelweni elincane ukuhlomisa indawo yokuphumula nokusebenza, futhi ngesikhathi esifanayo ikamelo akumele libonakale liqinile futhi linamathele. Ake sibheke eminye imibono yokulungisa ekamelweni elincane.
Ukwakhiwa kwangaphakathi kwekamelo elincane
Abaqambi batusa, uma benza ukulungiswa ekamelweni elincane, sebenzisa ama-shades alula abonisa ngeso lengqondo isikhala esincane ekamelweni. Abaningi bathanda amhlophe ahlanzekile, kodwa ngezinye izikhathi bangabheka njengezinhlanzi ngokweqile, ngakho-ke kudinga umakhelwane wezimpawu eziningana ezikhanyayo ngaphakathi. Kumele kukhunjulwe ukuthi endlini encane kuyoba yizinga elingalungile lezinga eliphezulu nokufakelwa okwesikhashana , "okudliwayo" ngakho ukuphakama okuncane ekamelweni.
Ngokuvamile uma uhlela ingaphakathi ekamelweni elincane eKrushchev sebenzisa imibala ebandayo, kodwa uma ukhetha imibala efudumele, ingaba nomthunzi omnene futhi ohlakaniphile obomvu, o-orange, ophuzi nabanye.
Ekamelweni elincane alizange libukeke limibalabala, uma ukhetha izinto zangaphakathi kungcono ukunikeza ukhetho lombala owodwa wombala. Amakhabhinethi aqinile, amatafula nezihlalo ngeke abe yinkimbinkimbi ekamelweni elincane. Esikhundleni sabo kungcono ukhethe ifenisha kusuka epulasitiki ekhanyayo noma ingilazi.
Amakhabhinethi ahlelwe kahle azobukeka kahle ekamelweni elincane. Izosiza ukulondoloza isikhala esiluthola isikhala sofa nokudada idesksi. Ikakhulukazi ethandwayo emakamelweni amancane yi-furniture-transformer, isibonelo, umbhede-wendwangu.
Esikhundleni somklami omkhulu omisiwe wokukhanyisa ikamelo elincane, kungcono ukusebenzisa izibani. Vula izibuko zamakamelo ngokubonakalayo, ezingasetshenziswa ekamelweni.
Ukusebenzisa imibono ukuze ulungise ikamelo elincane, ungakha indlu yangaphakathi yezitayela nezokuqala ekamelweni.
Ungabamba kanjani ikhabhinethi ngefilimu yokunamathisela?
Amatafula ekhofi enkuni
Indlela yokuhlela i-nursery?
Udonga lwezingane ekamelweni
Ucingo lwokhuni olunamandla
Ingaphakathi lendlu yangasese
Amakhetheni ekhishini enezihlo
Amasango ngesitayela seProvence
Ungabeka kanjani amathayili ogwadule ngezandla zakho?
Indlela yokwenza isihlalo ngezandla zakho siqu?
U-Vera Glagoleva ushonele - 8 izindima ezinhle zomdlali
Kungani amaScotzi agqoka iziketi?
Yini okufanele uyilungiselele kusuka ku-burger?
Ukudla ngesikhathi sokukhulelwa ngesonto
Amafutha e-Castor ezinwele
Iwayini lokusajingijolo - izindlela zokupheka kunazo zonke zokwenza isiphuzo sasekhaya
I-tea nge thyme - izakhiwo eziwusizo
I-Corner yikhiphe ekhishini
Ungenza kanjani itafula lekhofi ngokwakho?
Bianka Balti - biography
I-Jeans sarafan - amamodeli amahle kunazo zonke, aphephile futhi ahlekisayo
Kungani i-serum isebenza?
I-Carrageenan - ingozi futhi inzuzo
ISt. Peter's Cathedral (Bandung)
Isitembu samanzi emantwaneni
Ukulima kwamakhukhamba efasiteleni ebusika